amasevisi Isithuthi - ingenye izindawo amaningi asethuthukile, okuyinto njalo ezikhulayo ngenxa ukukhula kwesidingo ke. Uzenzela isinqumo: abantu njalo sizidinga izinkonzo zokuhamba izinto besiyoba sikhulu, noma umane ukuletha izimpahla olude. Yenqaba ukusebenza inkampani ngokukhethekile lokhu, akuyona akukho esitolo esisodwa ku-intanethi. Kuyefana nasendleleni ezihlukahlukene zokudla nezindawo zokudla ukuthi uthumele oda amakhasimende abo ku sekhefu lasemini.
Yini engingayisho - izakhamuzi ezivamile njalo into ukuthumela nokwamukela emasevisi ukulethwa yangasese, ngoba ayashesha nesebenza kangcono isimo ezakhiweni "Imeyili Russia". Kungenxa yokuthi lezi zici, futhi kukhona lolu hlobo amasevisi, efana kwezidingo.
Namuhla sizoxoxa inkampani, okuyinto Ingabizwa kufanele ngokuthi omunye wabaholi emakethe. It has a umlando onothileko nakho okukhulu kulo msebenzi futhi inikeza uhlu olubanzi amasevisi amakhasimende ayo. It ngokuthi inkampani, okuyinto isihloko lesi sihloko - "Business Line". Amazwana mayelana nenkampani, ulwazi mayelana isevisi uqobo, kanye amanye ulwazi mayelana nokukhokhwa amasevisi ngokuqinile, sizobe ukwethula kulesi sihloko.
Sizoqala Yiqiniso, lapho umuntu eba inhlangano ibhizinisi. Ngakho, njengoba kuphawuliwe ngokuchaza inkampani "Business Line" libuyekeza imisebenzi yayo yokugcina ukuqala emuva ngo-2001. Khona-ke ukulethwa service eyenzela izikhulu ukuthuthwa kwezimpahla izinkampani kanye ukulethwa yiziphi izimpahla - ngomuntu ngamunye.
Phakathi nalesi sikhathi inkampani ephethwe ukusungula ephumelelayo zokuthutha kanye Logistics uchungechunge, ukunika amandla ukulethwa eziphephile izimpahla ngokushesha ngangokunokwenzeka nganoma yingasiphi esisogwini Insimu Russian Federation. Ngo parallel, ifemu uye savela ku inethiwekhi real, okuyinto (kuze kube yimanje) amahhovisi ezingaphezu kuka-120. Bonke ukusebenza kusukela 1500 imizana yezwe lapho ikhasimende oda ukulethwa wezimpahla. Ekugcineni, ukuze sisebenze konke lokhu indlela enkulu imisebenzi kwezidingo oda izimoto ayizinkulungwane 4 umthamo ezahlukene. Ngokuphathelene umsebenzi, kufanele kuphawulwe ukuthi abasebenzi yenkampani siqukethe abasebenzi 20,000. Izinombolo umxhwele, akunjalo?
Yini linikeza amakhasimende ayo inkampani "Business Line"?
Okokuqala, kungcono zonke izinhlobo ukulethwa. Kungakhathaliseki engibathandayo kuyoba lokukhokha izimpahla (i umthumeli noma umamukeli - akukho mehluko), inkampani ilungele ukwenza ngawe emoyeni zokuthutha, wezimpahla ukulethwa amaloli, ezokuthutha iziqukathi, ukuthumela imoto yangasese ukuchitha ukulethwa njengoba leya ngcebo wosayizi omncane futhi wosayizi omkhulu ngisho ukwenza ukulethwa kwelinye izwe. Lokhu zinsiza ubonisa ukuthi inkampani izixazululo ayo izinkinga amakhasimende. Ngakho, waphendukela lapha, uzobe isiqiniseko ukuthi umkhiqizo uya ukuthola noma izothunyelwa ngesikhathi.
Ngaphezu kwalokho, kungashiwo mayelana namasevisi ozikhethela. Lezi zihlanganisa, ngokukhethekile, isembozo isitoreji efanele yalo, ukucutshungulwa kanye nezinye imisebenzi, okuyinto ngandlela-thile uyokuma phambi ikhasimende. Yenza kubo ezingeni eliphezulu, ungasiza inkampani "Business Line".
Iningi izinkampani ukuthi afeze ukulethwa kwezimpahla, kuhilela ekubalweni ikhasimende ngokheshi. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka lapho Dispatch noma irisidi. Zonke incike bani iqembu kukhokhelwe izimpahla. Kule ndaba, inkampani, okuyinto thina elichaza eminingana kuphumelele ngokunikeza amakhasimende ayo nge ikhono wenze ukukhetha ukuzimela indlela yokubala. Lolu khetho isiyatholakala ku-akhawunti yakho, okudaliwe somsebenzisi ngamunye.
Kuyo, ngokukhethekile, ukuboniswa umlando wawo onke ama-oda ukuthi iklayenti benza. Ukuze akhokhele ngamunye wabo, mane ucindezele inkinobho eyodwa ( "Khokha") bese ukhetha indlela ofuna ukubala. Kungaba, ngokukhethekile, amakhadi okuthenga ngesikweletu Visa kanye MasterCard.
Uma ukukhokhela imithwalo inkonzo, izimali zakho iyothathwa inkampani "Business Line", ngisho ngaphandle kokuya ukuphila. Le ndlela kwenza inkonzo elula kakhulu umthumeli, ukuvumela imodi "intanethi" ukulawula zonke izimpahla zabo.
Eqinisweni, akuyona zonke izici zenkonzo, okwenza kube novalo luya luncipha ngokwengeziwe ukuyisebenzisa. Kukhona, isibonelo, ukusebenza ukulandelela imoto. Uma, ukwenza isibonelo, inkokhelo ukuze uthunyelwe izimpahla isivele wenza, ungakwazi ngesikhathi sangempela ukubona lapho iphakethe yakho nganoma isiphi isigaba sayo yonke le nhlangano, futhi kanjani maduzane izonikelwa lapho sasilibangise khona.
Le sevisi iyasebenza kakhulu kumamukeli, ngoba kungaba futhi siqiniseke ukuthi ngempela ukuthenga salo ngendlela futhi izofika inkathi ethile yesikhathi.
Ukuze abasebenzisi abathintekayo yokuthengisa izinto ezikuyi-Internet ngubani, futhi kunenye indlela ezithakazelisayo ukuze bakwazi ukuzivikela futhi ahlinzeke enikwe iziqiniseko ezidingekile kumthengi. Wabiza inkampani "Business Line", "ukukhiya ukukhokha." Lisho ukuthini leli isimo futhi isebenza kanjani - ukufunda ku.
Sizokwenza uchaze isibonelo esikhethekile okungcono. Ake sithi wena ukuthengisa ifoni yakho ephathekayo. Uthole umthengi, kodwa-ke ngeshwa, kepha yena ungafuni athambise isandla ngowokuqala akafuni ukuthumela imali kusengaphambili, kodwa ungafuni ukuba, njengo, thumela kuye efonini. Kanjani ukuba ngibe kulesi simo? Ukuze wenze lokhu, kufanele isevisi "Business Line" Ukuvimba yokukhokha, okusho amandla ukuvimbela isibonelelo Umamukeli izimpahla iphuzu elithile.
Ekhuluma isibonelo sethu, kubukeka sengathi lokhu: Wena, ngumthengisi, thumela ifoni, kepha unqabela izinkampani ukukhipha izimpahla kumthengi. Yena, ephuzwini ekutholeni iphakethe bese eqala ukuhlola izimpahla. Okunjalo "Abaphilayo" ukujwayelaniswa nge umkhiqizo unesithakazelo, cishe hhayi ngaphansi kuka-90% abathengi. Siyabonga kuye, singabona ukuthi umkhiqizo usebenza ngempela, ifana incazelo nabo bonke nemingcele lobuchwepheshe. Ngaphezu kwalokho, umthengi uthumela imali esekhadini lakho, futhi ushayele kule "Business Line". Ukuvinjwa yokukhokha (okusho ukwenqatshelwa efanayo) luyasuswa, futhi le ndoda ucosha izimpahla. Yilokho lokhu indlela zokuzivikela isebenza kanjani.
Njengoba Izibuyekezo echaza "Ibhizinisi Line", isimo "ingidi inkokhelo" kusho ukuthi kungenzeka ukuba ukuqhuba ukuthengiselana ngangokunokwenzeka ngokuphepha kokubili umthengi kanye nomdayisi. Okokuqala, kuleli cala, akusho ibe "ingulube in a xhoxha", kodwa empeleni ubona embonweni walo futhi unelungelo ngisho ukuze ngimbambe ezingalweni zakhe. Eyesibili abakwazi ukhathazeke ubuqotho umthengi kanye uyazi ukuthi ngaphandle ukukhokhelwa akalamukelanga lelo phasela. Lona inzuzo kithi nakuye.
Nokho, ngaphezu okufanele umdumise, kuhlanganise kuzibuyekezo zomsebenzisi ku lamasu kungatholakala, futhi imibono engakhi. Ngokwesibonelo, kunezimo lapho ngasizathu simbe isuswe inkampani "Business Line" ukukhokhela lock (lokho kusho yokukhansela eyodwa emaceleni lokhu okukhethwa kukho). Kulokhu, isimo kufana ilungiselelo phakathi umuntu umthengi izimpahla futhi lesi sisebenzi service wemikhumbi. Okungenani, kungenjalo ukuchaza izenzakalo ezinjalo (echazwe kumasayithi eziningana) bengayi.
Njengoba sekuphawuliwe kakade, ukuze ukukhiya (ukuvinjelwa) isusiwe, kubalulekile ukuthi umthumeli iye yaqinisekisa lokukhokha, okuyinto umamukeli ukwenze. Ukuze wenze lokhu, esikhundleni salokho, kufanele uthintane inkampani ubanikeze isiqinisekiso ngamazwi yokukhokha. Empeleni, wena umane utshele opharetha ongathanda at umthwalo esibekiwe (njengoba umthumeli, kufanele uqinisekise) ukuze uvule.
Isigijimi esinjalo siyakha eqoshiwe, bese ngokushesha wathumela ngqo iphuzu udaba, okwamanje ukuthumela. Emva ekucubunguleni lo mlayezo, ikhishwe kumamukeli futhi kokwenziwe empeleni igcwaliswe.
Abantu abaningi abasebenzisa i service, cela mayelana nokuthi iyiphi ubufakazi bokukhokha. Impendulo: kuwe ngumthengisi, sinjalo nokuboniswa izimali ezitholakale ibhalansi ikhadi noma ohlelweni lokukhokha, lapho ukubala wenziwa. Njengoba inkampani, esihlinzeka izinsizakalo zokuthutha esihilelekile, ngaleyo ndlela kuqinisekisa umlayezo wakho umi isifiso ukuthumela ukukhiya isuswe kwaphiwa umamukeli.
Eqinisweni, ungase uzithole endaweni manje ebizwa ngokuthi isimo uhlala iphakethe lakho. Lokhu kwenziwa kusetshenziswa okufanayo inthanethi kokulandela ithuluzi, okwakubekelwa kakade ngenhla. Isebenza kakhulu ukumane: kufanele ucacise inombolo invoyisi amaphasela emrhuleni ekhethekile, ngemva kwalokho uzobona akhiphe eligcwele elivela ngedatha imithwalo. Kuzophinde icaciswe futhi isimo iphasela. Ngezinye izikhathi, lapho nokubhala, umthwalo kuyinto endleleni, "Khiya ukukhokha." Akukho okungalungile ngalokho, futhi udinga kuphela ulinde isikhashana eside.
Ngaphezu kokuhlola isimo website yenkampani kungenziwa futhi eziningi neminye imisebenzi. Ngokwesibonelo, phakathi kwalabo ukukhathazeka futhi uhlole inani wezimpahla. Uma kudingeka kudlule uhlobo oluthile iphakheji, umane ucacise impahla yayo e wokubala ekhethekile. Ukuze uthole yesibili, uyokunika ngumphumela izindleko okuyisibonelo ukuthumela. Lokhu kuyasiza uma ufuna, ukuthi bakwazi ukonga lokuthumela.
Uma abaqondi lutho mayelana isevisi isebenza kanjani, ukhululeke ukubuza imibuzo kusevisi ukwesekwa. Usebenza lapha ngezindlela eziningana: ngocingo ku hotline (495-755-55-30) noma ngeposi (impendulo ifomu kuwebhusayithi). Kukhona Kwiwindi futhi ukuthumela imilayezo ngqo khona umxhumanisi online.
Ngakho, ekusekeleni amakhasimende ayo, inkampani "Business Line" has ngokucacile okuthile beziqhayisa.
Inkampani amahhovisi ezingaphezu kwekhulu kulo lonke izwe (sibalo esiqondile thina esicashunwe ngenhla), ngakho abasebenzisi kumele bakwazi ukubona ibalazwe interactive, lapho amaphuzu ukulethwa izimpahla nokuthi ukuze afinyelele kubo. Lena ku website yenkampani, lapho wonke amahhovisi service zihlukaniswe emadolobheni.
Singagcina ngokubu- uqaphele ukuthi ihhovisi omkhulu ophakathi itholakala Petersburg ngo-Vnukovo, 2. It lungatholakala kunoma iyiphi izikhalazo noma izicelo.
Izincomo abasebenzisi ukuthi siye sathola ku inkampani, sisonke, abe umlingisi omuhle. Ngokungangabazeki, kunezizathu futhi izici ezingezinhle ikheli service (ukulethwa ngasekupheleni, ukubambezeleka, izinkinga uma kubhaliswa nokunye okuningi). Kodwa isimo esinjalo - a rarity, kusukela kuyinsakavukela - lena uma isevisi ngokugcwele kwenziwe imisebenzi yayo futhi inikeza amakhasimende ayo eliphezulu ekuhlinzekeni lomsebenzi.
Kungakhathaliseki bokwenza ngokusebenzisa le sevisi ukulethwa namakhasimende kwezigidi ezimbili. Lena yi kakhulu inkampani yangasese, ngisho esikhathini zomnotho ezinzima ezifana.
Futhi kusukela "Business Line" - lena ngempela omunye wabaholi emakethe nge engu-15 nakho, mina alinge zisikisela ukuthi inkampani isebenza ngokucacile ebaleka-e, isu kwaphumelela kakhulu, okuyinto enomthelela ukuthuthukiswa yayo.
Ukuze afeze izimpahla ezivela Kazakhstan eRussia - Amathuba kanye Izindlela
Ukugcina commercial umshini ifriji
Indlela yokuhamba indlela ngezandla zakhe
A. S. Pushkin: 1820-1824, isixhumanisi eningizimu. Ukufingqa imisebenzi esemqoka
Indlela okumele kusebenze ikhodi ibhonasi: World of Tanks: incazelo kanye imfundo manual
ALT. AST egazini
Izhevsk Commerce and Economic College. Okukhethekile ezohwebo kanye nezomnotho esikoleni lobuchwepheshe Izhevsk
Indlela aphathe stye: ezinye amacebiso awusizo.